Raseta Joseph Delphin - Wikipedia
(tonga teto avy amin'ny RASETA Joseph Delphin)
Raseta Joseph Delphin dia mpitari-tolona malagasy, niady tamin'ny fanjanahantany, anisan'ireo namorona ny antoko M.D.R.M.
1.3 MDRM sy ny raharaha 29 Martsa 1947
1.4 Ny fodiany an-tanindrazana sy ny niafarany
Ny fiaviany sy ny fianaranyHanova
Teraka tao Marovoay , faritanin'i Mahajanga ny faha-9 Desambra 1886. Zanak'i Razaka Seta (Tsimahafotsy) dekan-dRainilaiarivony, Praiministra, ary notendreny ho governora hiahy ny fitrandrahana volamenam-panjakana tao Maevatanana.
Niditra nianatra tao amin'ny kolejy quakers FFMA Faravohitra ary nifindra tao ao amin'ny Kolejy Masindahy Joseph Ambodin'Andohalo. Tafiditra ho mpianatra mpitsabo ta amin'ny sekoly fianarana ho mpitsabon'Antananarivo ny taona 1903 ary nahazo ny mari-pahaizana naha-mpitsabo tamin'ny taona 1908.
Ny niatombohany nitolonaHanova
Teo anelanelan'ny taona 1908 ka hatramin'ny taona 1922, dia nafindra toerana matetika, ka ny taona 1922, dia tao Ambositra ary niditra ho mpikambana tao amin'ny fikambanana Vy Vato Sakelika. Io taona io ihany, dia nametra-pialana tsy ho mpiasam-panjakana ary nanorim-ponenena tany Taoliara sy niasa ho an'ny tenany tany. Ny taona 1925, dia niara-nitolona tamin-dRalaimongo hanafoanana ny Indigénat.
Ny taona 1933, dia niditra ho mpikambana tao amin'ny «ligue anti-impérialiste et anti-communiste» notarihin'i Jourdain Francis. Ny taona 1937, dia niara-namorona tamin-dry Ralaimongo sy Dussac Paul ny antoko kaominista malagasy, antoko nofoanan'ny mpanjanatany ny taona 1939. Ny volana mey 1939, dia nilatsaka hofidina tao amin'ny Conseil Supérieur des Colonies. Ny Jona 1940, dia nanohana ny antso nataon'i de Gaulle. Ny faha-9 Aprily 1941, dia nosamborina ary notanana tao Moramanga ary novotsorana ny taona 1943. Voafidy ho mpanolotsain'ny tananan'i Toliara io taona io ihany.
MDRM sy ny raharaha 29 Martsa 1947Hanova
Teo anelanelan'ny taona 1945 -1946, dia voafidy in-telo ho solombavambahoakan'i Madagasikara tao amin'ny Antenimiera mpamolavola sy ny Antenimieram-pirenena frantsay. Iray tamin'ireo mpamorona ny antoko M.D.R.M tao Parisy rehefa avy nanatrika ny fivorian'ny Firenena mikambana tany London, ary voafidy ho filohan'ny M.D.R.M.
Mbola tany Parisy izy no nipoaka ny «raharaha 29 Martsa 1947» ary ny faha-6 Jona 1946 izy vao nosamborina rehefa avy nalana taminy ny zo maha-solombavambahoaka azy, ary naverina taty an-tanindrazana, ka nahibo am-ponja tetsy Antanimora. Voaheloka ho faty tamin'ilay fitsarana makotroka natao tetsy Andafiavaratra ny faha-4 Oktobra 1948 ary natao sesitany tany Mohéli (Comores) avy eo dia nafindra tany Calvi (Nosy Corse). Nahazo fanalefahan-tsazy ny taona 1955 noho ny antony fahasalamana.
Nitsoaka mangingina hody aty an-tanindrazana, ary voasambotra tao Djibouti ka naverina tany Frantsa ny faha-9 Jolay 1959.
Ny fodiany an-tanindrazana sy ny niafaranyHanova
Ny volana Jolay taona 1960 vao navela hody malalaka tato an-tanindrazana niaraka tamin'ireo solombavambahoaka 2 hafa, kanefa, nandà ny hiara-miasa tamin'i Tsiranana sy ny governemanta notarihiny. Namorona ny antoko Madagasikara Sambatra ary voafidy ho solombavambahoan'Antananarivo.
Nilatsaka hofidiana ho filohan'ny Repoblika nifaninana tamin'i TsirananaA ny taona 1965, kanefa tsy lany.
Tahaka an-dRakotonirainy Joseph ihany, dia sahirana teo amin'ny fiainana ihany koa tamin'ny tanin'andro harivany ary maty tamin'ny taona 1978.
Ilaitangena (Feon'ny Merina, lah. faha-162, 11 Jolay 1997)
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Raseta_Joseph_Delphin&oldid=1000276"
Dernière modification le 14 Janoary 2021, à 04:39
Voaova farany tamin'ny 14 Janoary 2021 amin'ny 04:39 ity pejy ity.